Wararka - Suuqa peptides ee kalluunka loo yaqaan 'collagen peptides' waxaa lagu qiyaasay USD 271 milyan sanadka 2019.
Suuqa peptides-ka kalluunka ee loo yaqaan 'collagen peptides' waxaa lagu qiyaasay USD 271 milyan sanadka 2019.
Suuqa peptides-ka kalluunka ee loo yaqaan 'collagen peptides' waxaa lagu qiyaasay USD 271 milyan sanadka 2019. Warshadaha waxaa la sii rajeynayaa inay ku koraan CAGR 8.2% inta lagu jiro muddada saadaasha ee 2020-2025. Kalluunku wuxuu dhiirrigeliyay xiise aad u weyn oo u dhexeeya soosaarayaasha dawooyinka iyo nafaqada sida ilo hodan ah oo ka mid ah xeryahooda bioactive, oo ay ku jiraan peptides iyo borotiinnada. Sababtoo ah waxtarkooda la sheegay ee daryeelka maqaarka iyo daryeelka timaha, peptides kalluunka loo yaqaan 'collagen peptides' ayaa helay sumcad, bioactivities-ka joogtada ah ee ka jira warshadahaas ayaa horseeday cilmi-baarayaasha inay soo saaraan wax soo saar cusbooneysiin iyo waxtar badan leh.
Collagen waa borotiinka ugu weyn ee unugyada isku xira iyo molikiyuulkeeda waxaa sameeya seddex qaybood oo polypeptide ah, oo loo bixiyay silsilado alfa, taas oo caan ku ah iibinta kulul sababtoo ah si ballaaran ayaa loo isticmaalaa iyo faa'iidooyinka caafimaadka aadanaha.
Collagen waa koox ka mid ah borotiinka si dabiici ah u dhaca. Waa mid ka mid ah borotiinnada dheef-shiid kiimikaadka dhaadheer ee shaqooyinkoodu ka duwan yihiin kuwa borotiinka adduunka sida enzymes. Waxay ku badan tahay inta badan qallalan iyo laf-dhabarta.